Hall ny voarara avy amin'ny YouTube | Apg29
Mpitandrina mpivady Stefan sy Mary Hallman dia voarara amin'ny YouTube.
Mary Hallman avy amin'ny fampitàna mivantana aloha anisan'izany YouTube.
Ny mpiandry ondry malaza Stefan sy Mary Hallman ny fantsona YouTube efa nakaton'ny YouTube noho ny "miverimberina na mafy ny fanitsakitsahana ny YouTube kabary politika mandrara fankahalana."
"Heloka Bevava hamely ny politika"
Mpitandrina mpivady Stefan sy Mary Hallman naniraka mivantana avy ny Studio tao Myresjöfönster na tao amin'ny Facebook sy YouTube. Fa ankehitriny ny fantsona YouTube no niala ny Google-fananan'ny orinasa ny antony fa efa nanao "miverimberina na mafy fanitsakitsahana ny fankahalana ny politika mandrara kabary" .
Pasitera mino fa io no lainga noho ny hitia ny olona rehetra, dia mitory ny Filazantsara sy ny mitondra ny fandaharana rehetra mpijery ny fahafahana hanaiky an'i Jesosy.
Ny email avy tamin'ny YouTube
Mandefa raha araka ny Youtube ny fanakatonana naniraka tany amin'i Hall ny.
Ao amin'ny mailaka izay Stefan Hallman nahazo izany koa milaza fa "tsy afaka manokatra, manana na mamorona kaonty YouTube hafa" . Fampiatoana dia ho toy izany mandrakizay, ary maneran-tany. Miezaka ho any ny fantsona Nihaona tamin'ny andinin-teny ity:
Miezaka ny hijery ny lahatsary izay sisa nandinika lalina amin'ny aterineto, dia toa izao:
Hoy i Stefan Hallman tao amin'ny Facebook :
"Tohina izahay, ary tena mampalahelo fa ny fantsona YouTube amin'ny mpanjifa 461 no nakatona mandrakizay."
Nahazo hery politika
Ny fantsona dia voarara amin'ny YouTube, efa namaky sy nandre imbetsaka hatramin'ny dia nampahery ny politikany . Hisy na kristianina sy tsy kristianina. Vao haingana aho no namaky fa Kristianina iray hafa fantsona efa nakatona. Ny fantsona izay naneho hevitra manohitra ka tsy mitovy hevitra amin'ny zava-drehetra.
Efa reko ihany koa fa ny silamo fantsona 200 no nakatona. -Nihazakazaka izy ireo Isis fampielezan-kevitra sy ny maro hafa.
Efa reko ihany koa fa Youtube ho hentitra kokoa mba hahafahantsika manantena fanidiana bebe kokoa. Eto na ny Kristianina sy ny tsy Kristianina mijaly.
Izaho manokana dia efa nanapa-kevitra fa ho nitoraka bilaogy sy ny fampiasana ny haino aman-jery sosialy, raha mbola araka izay azo atao mba hitondra ny hafatry ny Jesoa Kristy. Izany no toe-tsaina ahy hatramin'ny voalohany toy ny nataoko teo amin'ny tranonkala ny bilaogy toerana tamin'ny 2007.
Nanapa-kevitra koa aho fa aho hikambana amin'ny olona i Jesosy mba mahazo ny fahafahana handray Azy mba ho voavonjy. Aza mahazo anjara amin'ny zavatra hafa maro, izay afaka sady maizina sy mety afaka intsony tonga ny hafatra Jesosy.